Waa rasmi: Isticmaalka xashiishadda madadaalada ayaa hadda sharci ka ah Gobolka New York • Dawooyinka Inc.eu
Toddobaadkii hore, Guddoomiyaha Andrew Cuomo wuxuu saxiixay sharci lagu sharciyeeynayo xashiishadda madadaalada ee Gobolka New York.
1 Qaab dhismeedka sharciga
2 Sigaar cabid meel fagaare ah
3 Isbedelada xasaasiga ah ee New York
Saamayn dhakhso leh, sigaar cabista xashiishka madaddaalada waa in hadda loola dhaqmaa si sharci ah, oo la mid ah sigaarka. Sharci fulintu waxay heshay amarro cusub oo ku saabsan sida looga jawaabayo isticmaalka xashiishadda, iyo bulshada xashiishadda, tani hubaal waa neef hawo nadiif ah.
Qaab dhismeedka sharciga
Xashiishadda dawada ah ayaa hore looga sharciyeeyay Gobolka New York. Sharcigan cusub wuxuu sii ballaarin doonaa barnaamijka hadda jira ee gobolka wuxuuna u oggolaan doonaa abuurista labada barnaamij ee dadka waaweyn loo adeegsado iyo cannabinoid hemp.
Hirgelinta waxay qaadan doontaa hal ilaa laba sano ka dibna iibinta tafaariiqda ayaa bilaabmi doonta. Dowladda Cuomo waxay qiyaaseysaa in sharciyeynta xashiishadda madadaalada ay ugu dambeyntii kordhin karto dakhliyada gobolka in ka badan million 250 milyan ($ 300 milyan) sanadkii. Intaas waxaa sii dheer, soo bixitaanka warshadahaan cusub waxay leeyihiin awood ay ku abuurtaan ilaa 60.000 oo shaqo qaran.
Sigaar cabista meelaha dadweynaha, waddooyinka ama laamiyada ayaa hadda suurtogal ka ah Gobolka New York (afb.)
Sigaar cabid meel fagaare ah
Gobolka New York ma noqon karo kii ugu horreeyay ee sharciyeeya xashiishadda madadaalada, laakiin wax yar ayey ka duwan yihiin. Beddelaad sharci waa rukhsadda cusub ee sigaar cabista dadweynaha.
Guntii iyo gunaanadkii, haddii si sharci ah laguu oggol yahay inaad sigaar cabto, sidoo kale waxaad si sharci ah u cabi kartaa laabatooyinka. Sigaar cabiddu hadda waa ka mamnuuc jardiinooyinka iyo xeebaha taasna isma beddelayso. Laakiin haddii aad meel kale u lugeyso oo aad dareento rabitaan ah inaad shido meel wadajir ah, booliisku keligiis buu kuu daynayaa.
Markii sharciyada cusub ay dhaqan galeen, ciidanka booliska maxalliga ah ee NYPD ayaa soo saaray qoraal afar bog ka kooban oo ay ku faahfaahinayaan amarradooda cusub ee ay soo saareen saraakiisha booliska ee ku saabsan sida looga jawaabayo isticmaalka xashiishka
Sida ku xusan qoraalka, waxaa lagu sheegay: Sigaar cabidda marijuana mar dambe saldhig uma aha in lagu dhowaado, joojinta, u yeerista, qabashada ama baaritaanka. Dadka reer New York ee marijuana ku caba dariiqyada ama laamiyada waxaa ilaaliya sharciga. “
Isbedelada xasaasiga ah ee New York
Waxaa jiray isbeddelo kale oo deg deg ah oo sharci dejinta ah badankoodna waxaa ka mid ah hab maamuusyada fulinta. NYPD waxaa la farayaa inay bedesho habka ay uga jawaabaan iibka 1-ilaa-1.
Udugga xashiishadda ma ahan sabab dambe oo loo raadsado gaari. Haddii darawalku u muuqdo inuu jir ahaan sarkhaansan yahay, urta xashiishka kaligeed maahan sabab baaris dheeraad ah.
Waxaa jira qaddarka ugu badan ee la oggol yahay 3 oz ama 24 garaam oo xashiishad urursan qofkiiba
Haddii aan wax lacag bixin ama magdhow kale la arki karin, isweydaarsiga xashiishka looma arko inuu yahay iib. Xaqiiqdii, wadaagiddu waa suurtagal, laakiin iibsigu waa ganacsi.
Dhammaan diiwaanada dambiyeed ee ku saabsan haysashada xashiishadda, oo ay ku jiraan xukunno hore, waa in isla markiiba la tirtiro
Dembiyada la xiriira xashiishadda Cannabis dib dambe looma tixgelin karo inay tahay arrin dambiyeed
Gobolka New York wuxuu horey u ahaa aag dagaal ba’an kula jiray daroogada, iyadoo sharciyo adag ay kala kexeeyeen bulshooyinka. Bayaan uu saxiixay biilkan kadib ayuu gudoomiye Cuomo ku sharaxay sababaha ka dambeeya isbadaladan culus:
Mamnuuca xashiishadda ayaa muddo aad u dheer si aan kala sooc lahayn loogu beegsanayay bulshooyinka midabka leh oo xabsi adag ku jira, sanado badan oo shaqo adag ka dib, sharcigan curdinka ah wuxuu cadaalad siinayaa bulshooyinka la hayb sooco ee muddada dheer, wuxuu qaatay warshad cusub oo kobcin doonta dhaqaalaha, waxayna soo jeedineysaa ilaalinta bulshada. New York waxay leedahay taariikh la taaban karo oo ah caasimad horumarineed oo qaran Maraykanka, iyo sharcigan muhiimka ah wuxuu sii wadi doonaa dhaxalkaas markale. “
Waxa kale oo jira a bogga rasmiga ah lagu bilaabay waxbarasho ku saabsan isticmaalka xashiishadda ee Gobolka New York.
Ilo ay ka mid yihiin CannabisLifeNetwork (EN), NBC (EN), UrbanCNY (EN)
Americacannabisgo'aan qaadashosharci ahaansharciyeyntasharci-dejintadaawo cannabisdaawada cawskaMaraykankasharciga
Jay-Z oo caan ah oo heesaha caan ku ah, oo leh sumaddiisa marijuana, ayaa loogu yeeray warka `` mid aad u xiiso badan. '' Jay-Z ayaa ...
Shirkadda Cannabis ee fadhigeedu yahay Toronto ee Cronos Group ayaa soo warisay khasaaro hawlgal oo dhan $ 31,3 milyan oo loogu talagalay ...
Waxaad nooshahay hal jeer, laakiin markay timaado xashiishadda, xulashooyinkaaga maalgashiga ayaa umuuqda kuwa aan dhamaanayn ...